ငါ့အချစ်တော်တိရစ္ဆာန်များချိန်းတွေ့ » Prospective ခွေးပိုင်ရှင်များသည် Bedlam လယ်ယာစစ်ဆေးရမဲ့စာရင်း
အားဖြင့် Jon Katz
နောက်ဆုံးအပ်ဒိတ်လုပ်: မေ. 29 2020 |7မိဖတ်ပြီးသား
ယေဘုယျအားဖြင့်တိရိစ္ဆာန်များ၏အလွဲသုံးစားမှု, အထူးသဖြင့်ခွေး, ကသာကိုယ်ကျင့်တရား 'option ကိုတစ်ပေါင်မှခွေးကိုကယ်တင်ရန်ဖြစ်သည်ဟူသောခံယူချက်အားပိုင်ရှင်များ၏စာရေးဆောင်တဲ့ခဲ့သည်, အဘယ်မှာရှိ euthanasia ရင်ဆိုင်နေရ. ဒါဟာခွေးကိုကယ်တင်ဖို့ရန်အံ့သြစရာအတွေ့အကြုံရနိုင်ပါသည် (ငါ့ကယ်တင်နိုင်ခဲ့နယ်စပ်ဒေသဆိုင်ရာ Orson ငါ့စားပွဲခုံအောက်အရပ်, မုသာဖြစ်ပါတယ်), ဒါပေမဲ့, ခွေးကိုပိုင်ဆိုင်မှုကိုကိုယ်နှိုက်ကတူ, ဒါကြောင့်လူတိုင်းကမင့်. ဒါဟာအစကောင်းတစ်ဦးမျိုးဆက်များမှကြီးမြတ်တဲ့ခွေးကိုတွေ့ရှိဖို့အံ့သြဖွယ်အတွေ့အကြုံရနိုင်ပါသည်. အဲဒီနှစ်ယောက်တို့ရှိသည်, အဖြစ်ကိုကောင်းစွာ: တနွားများသိုးတို့ကိုငါ့အလယ်ယာအလုပ်လုပ်ပြီး, နှင့်နောက်ဆုံးပေါ်, Clem, ချိုမြိန်ပေါင်းသင်းနဲ့ငါ့အိမ်နှင့်ဘဝ suffuses. ငါသူမ၏ကြည့်ရှုတိုင်းနီးပါးအချိန်ကိုပြုံး. ဘယ်သူကမှဘယ်လိုလူစားခွေးကိုသင်တို့သည်ရင့်၏ dictate နိုင်, အကယ်စင်စစ်ငါသည်. သင်ကဂရုစိုက်ရန်ရရှိပါသည်, ဒါကြောင့်သင်ချစ်ရန်ဖွယ်ရှိပါတယ်တဦးကိုတွေ့ရှိ.
ဒါပေမယ့်သင့်ရဲ့အိမ်စာပြုပါ. ပင် forethought နှင့်အတူ, တက crapshoot တစ်ခုခုဖြစ်နေဆဲ. ခွေးများဖွယ်ရှိ inbreeding ကျန်းမာရေးနှင့်စိတ်ထားပြဿနာတွေဖန်တီးပြီးမှုတွေကိုဖြစ်စေဘယ်မှာခွေးပေါက်လေးတစ်ကောင်စက်များ High-ထဲမှာ volume မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများထံမှလာအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်စတိုးဆိုင်များဝယ်ယူ. အယ်ဒီတာဂျိမ်းစ် Serpell နှင့်သူ၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် J ကိုရည်ညွှန်းလေ့လာချက်များအရ. တစ်ဦးက. အဆိုပါပြည်တွင်းခွေးများအတွက်အတွက် Jagoe, အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ဆိုင်ကနေရရှိခဲ့ခွေးအများကြီးပိုမျိုးဆက်များသို့မဟုတ်အမိုးအကာမှခွေးထက်လူမှုရေးစိုးရိမ်မှုတွေနဲ့ကြီးစိုး-type ကိုကျူးကျော်ရန်စပြလေ့ရှိပါတယ်. အများစုကကယ်ဆယ်ရေးနှင့်အမိုးအကာခွေးအကျင့်တွေပြဿနာများရှိသည်, မိမိတို့အဘယ်အပြစ်ကိုမျှအားဖြင့်. သူတို့ကတလွဲအ​​သုံးချခဲ့ပြီးပြီ, စိတ်ဒါဏ်ရာ, သို့မဟုတ်ထပ်ခါတလဲလဲ re-homed, သောအချက်, ကုသရေးဆေးပညာ Pennsylvania တက္ကသိုလ်၏ကျောင်းအညီ, သူတို့လှူဝါးတူပြဿနာများရှိသည်အများကြီးပိုဖွယ်ရှိပါတယ်, ကျူးကျော်ရန်စ, ခှေးဟောငျ, Over, ဘုရားသခင်နှင့်အဘယ်ခေါ်ဆိုခကလူသားတွေ “ခွဲခြာစိုးရိမ်ပူပန်,” အရည်အသွေးပြည့်မျိုးဆက်များမှ purebreds ထက်.
တာဝန်ယူမှုရှိသောကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့များနှင့်အမိုးအကာလုပ်သားများဒီကိုဝန်ခံပေမယ့်သေချာမွေးစားသူများကနားလည်စေမသာ, ခွေးနောက်ကျောသို့မဟုတ် bounce မနိုင်အောင်, ပိုမိုဆိုးရွား, နှိပ်စက်ပင်ဆင်းရဲသို့မဟုတ်အခြားသူများကိုထိခိုကျ. သို့သော်လည်းငါသည်ခေတ်ရေစီးကြောင်းနေအိမ်များသို့ကြမ်းတမ်းသောသို့မဟုတ်ပူပန်ခွေးကိုရွှေ့ဖို့စိတ်အားထက်သန်လွန်းနေသောငတ်မွတ်သောသူတို့ကိုခွေးအဖို့စိတ်ဇောနှင့်ဆက်ကပ်အပ်နှံမှုနှင့်အတူ suffused အချို့ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်သားများကြုံတွေ့ရပါတယ်. ထိုအအသိစိတ်မျိုးဆက်များမှပင်ခွေးသူတို့ရဲ့မိခင်နှင့်ညီအစ်ကိုမောင်နှမများအားဖြင့်ပုံဖော်ကြသည်, အချို့ပျက်စီးနိုင်အောင်, ကြောက်မက်ဘွယ်သော, နှင့်ရှုံး, အခြားသူများကိုအန္တရာယ်ကင်းကင်းနဲ့ယုံကြည်စိတ်ချရသောခံစားဖို့သင်ယူနေစဉ်. မရိုးသားတဲ့သို့မဟုတ်လောဘကြီးတဲ့မျိုးဆက်များ၏ပဒေသာလှကုန်ပစ္စည်းသို့မဟုတ်စီးပွားဖြစ်အကြောင်းရင်းများကြောင့်ခွေးအစုလိုက်အပြုံလိုက်-ထုတ်လုပ်ရန်, ကျန်းမာရေးသို့မဟုတ်စိတ်ထားသမိုင်းနှင့် ပတ်သက်. မပါဘဲ. ခွေးကစကြဝဠာလုံးဝနီးပါး unmonitored နှင့်လွှမ်းအားဖြင့်စည်းမဲ့ကမ်းမဲ​​့ဖြစ်ကတည်းက, ရန်ပုံငွေချို့တဲ့မှုဒေသန္တရအစိုးရများ၏, ခွေးလိုသူများအတွက်လူတို့သည်မိမိတို့ကိုယ်ပိုင်အပေါ်အမှန်တကယ်ဖြစ်ကြောင်း. ကကိုးကားများအတွက်မျိုးဆက်များနှင့်ကယ်ဆယ်ရေးအုပ်စုများမေးမြန်းဖို့ကောင်းတဲ့အိုင်ဒီယာပဲဘာကြောင့်ဖွင်, ဒါကြောင့်သင်သည်သူတို့၏အခြားခွေးထွက်အလုပ်လုပ်ခဲ့ကြပါပြီဘယ်လိုမြင်နိုင်ပါသည်.
ခွေးကိုရွေးချယ်ခြင်းဟာကိုယ်ကျင့်တရားသို့မဟုတ်နိုင်ငံရေးလုပ်ရပ်လုပ်ရ dicey ဒါဟာင်. သင်ကကယ်ဆယ်ရေးခွေးကိုရွေးချယ်မယ်ဆိုရင်သူတို့သိရ, သူသို့မဟုတ်သူမအထူးသဖြင့်စိတ်ရှည်မှုနှင့်ကျွမ်းကျင်မှုလိုအပ်ပေလိမ့်မည်. ခွေးအများစုဟာလေ့ကျင့်သင်ကြားသို့မဟုတ် retrained နိုင်ပါသည်, ပင်အဟောင်းအသက်အရွယ်မှာ, သင်မူကား, အချိန်နှင့်အလုပ်၏တသမတ်တည်းကတိကဝတ်ဖို့လိုလိုလားလားသို့မဟုတ်မစွမ်းနိုင်မယ်ဆိုရင်ကလေးတွေ, ခွေးကိုတစ်ဦးမတူသော်လည်းပိုကောင်းသင်နှင့်ကိုက်ညီစေခြင်း. အမိုးအကာအတွက်ဤမျှလောက်များစွာသောငတ်မွတ်သောသူတို့ကိုခွေးရှိပါတယ်တဲ့အခါ purebred ခွေးကိုရယူခြင်းနေဆဲဖြစ်သည်, ငါ့စိတ်ထဲ, တစ်ဦးဿုံတရားဝင် 'option ကို, တဦးတည်းနှင့်တစ်ခါတစ်ရံတွင်ပိုမိုကောင်းမွန်သော.
ဖြေးဖြေးလုပ်ပါ. သင်တစ်ဦးကို TV show မှာကြိုက်တယ်သို့မဟုတ်လမ်းပေါ်ဆင်းလမ်းလျှောက်သွားတမြင်သောကြောင့်ခွေးအပေါ်ဆုံးဖြတ်ချက်မချပါနဲ့. သို့မဟုတ်သင့်ကလေးတွေအံ့သြဖို့, ဒါမှမဟုတ်သင့်ရဲ့လက်ချည်း nesting များနမူနာမိဘများ, သို့မဟုတ်သင်တစ်ဦးဖောက်ကြားသိသောကြောင့် smart ဖြစ်ပါတယ်. နယ်စပ်ရေးရာ Collis စမတ်ရှိပါတယ်, ဒါပေမဲ့သူတို့ပြောမပြနိုင်လောက်အောင်တုံးအကျင့်တို့ကိုကျင့်, အမှိုက်သရိုက်ကုန်တင်ကားဝက်အစုသည်ရန်ကြိုးစားနေတူ. တစ်ဦးက smart ခွေးကိုသေချာပေါက်အလွန်ကြီးစွာသောအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်မဖြစ်, ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်. Orson ရေခဲသေတ္တာကိုဖွင့်ခြင်းနှင့်တစ်ခုလုံးကိုကြက်သားကိုဖယ်ရှားဖို့ဘယ်လိုထွက်နေသေးတယ်သောအခါငါကြည်နူးစရာကောင်းတဲ့မဟုတ်သလိုဒဿနကိုလည်းမခဲ့.
ခွေးအစာကြော်ငြာများအတွက်မြက်ခင်းပေါ် frolicking အဆိုပါ pups လှတ​​ယ်, ဒါပေမယ့်အလေးသာသင်အမှန်တကယ်ခွေးကိုဆည်းပူးကြမည်ဖြစ်ကြောင်း. ရီးရဲလ်ခွေးပေါက်စ housebreaking လေ့ကျင့်သင်တန်းကာလအတွင်းယာဉ်မတော်တဆမှုရှိသည်, မြက်ခင်းများအတွက်အမှားကော်ဇော, သင်တန်ဖိုးထားသောအရာတို့ကိုဝါး. ရီးရဲလ်ခွေးသမင်ဒရယ် scat အတွက်လှိမ့်ပြီးနောက်အိပ်ရာပေါ်ကိုခုန်. သူတို့ဟာရိုက်ချက်နဲ့ဆေးဝါးများလိုအပ်; သူတို့ဖျားတာနာ.
ရီးရဲလ်ခွေးပန်းခြံတဆင့်သင့်မြှောင်ကိုချည်နှောင်ဖို့အခွင့်အလမ်းများစွာရစေခြင်းငှါဘယ်တော့မှမ. ဤမျှလောက်များစွာသောခွေးဒါကြောင့်ဆိုးဆိုးရွားရွားလေ့ကျင့်သင်ကြားကြလို့ပါပဲ, သူတို့မဟုတ်တဲ့ခွေးချစ်သူတွေကိုပိုမိုမသက်မသာဖြစ်စေခြင်း. နိုင်ငံတဝှန်းလုံးရဲများကလွှတ်ခွေးကျင့်သောလူတို့အဘို့လက်မှတ်တွေရေးဖို့. ခွေးပိုင်ရှင်တွေကသူတို့အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များအဘို့အတရားစွဲရ’ အကိုက်ခံရ, ပင်အန္တရာယ်ကိုအပြုအမူများအတွက်. အာမခံကု​​မ္ပဏီများ ပို. ပို. သင်ရှိသည်သောခွေးကိုဖောက်ကြည့်ရှုစစ်ဆေး, သူတို့လက်မခံလို့လျှင်နှင့်မူဝါဒများ cancel. အချို့သောတိရစ္ဆာန်အခွင့်အရေးအဖွဲ့များခွေး သာ. ကြီးမြတ်သောတရားဝင်အနေအထားပေးသင့်ယုံကြည်, '' လူသားများနှင့်အတူနီးပါးနှင့်ညီမျှ. တချို့လူသားတွေခွင့်ပြုသင့်မယုံကြည်ကြဘူး “ပိုင်ဆိုင်” မှာအားလုံးတစ်ဦးကိုခွေး. သို့သော်ခွေးလေ့ကျင့်ရေးခွဲတမ်းသီအိုရီပိုင်ဆိုင်မှုတာဝန်တွေကိုအလေးပေးဖော်ပြ.
* နှင့်ဤတာဝန်များကို unremitting နိုင်ဟုထင်ရ.
ခွေးတွေကလောင်းနှင့်အေးခဲနေသောင်သောအခါ၌ပင်ထွက်သွားကြဖို့လိုအပ်. သူတို့ကအာရုံစူးစိုက်မှုကိုလိုအပ်ပါတယ်, ချစ်ခင်စုံမက်, ဆွ, နှင့်လေ့ကျင့်ခန်း, သင်ပင်ပန်းတဲ့အခါမှာတောင်, အလုပ်ရှုပ်သည်, သို့မဟုတ်မဟုတ်ဘဲစိတ်ဓါတ်များအတွက်. သင်ကတနင်္ဂနွေပိတ်လိုတဲ့အခါသူတို့ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေ abate မခြင်းသို့မဟုတ်သင်ရုံးမှာနှောင်းပိုင်းနေထိုင်လျှင်.
အကြောင်းကြားခွေးချစ်သူတွေဒီပြဿနာတွေမျှော်လင့်ခြင်းနှင့်ဟာသနှင့်သည်းခံခြင်းနှင့်တကွသူတို့ကို navigate. ပြန်လာအတွက်, အလွန်ချစ်ရ, ပျော်စရာ, နှင့်ပေါင်းသင်း. မည်သည့်ဆက်ဆံရေးတွင်ပဋိပက္ခများနှင့်ဆုလာဘ်ရှိပါတယ်, လူ့သို့မဟုတ်ခွေးတစ်ကောင်ကို. ဒါကြောင့်ခွေးရန်ကြွလာသောအခါငါသည်ကြာမြင့်အမြင်ယူကိုယုံကြည်. သင့်အနေဖြင့်ယခုအချိန်တွင်ထက် ကျော်လွန်. ကြည့်ရှုရန်လိုအပ်ပါတယ်, သင်တို့သုံးယောက် A.M မှာကြမ်းပြင်ပေါ်မှာအထူးသဖြင့်လာသောအခါ. သဘာဝတရားက 's Miracle နှင့်အတူကော်ဇောမှာ dabbing, ထိုအနံ့ကိုဖယ်ရှားရန်ကြိုးစားနေ. အချိန်ကြာမြင့်စွာအမြင်သာဒီတိရစ္ဆာန်များ၏သဘောသဘာဝကိုနားလည်သဘောပေါက်နှင့်တကွကြွလာ, ပင်ကြိုးစားပမ်းစားနဲ့သူတို့သည်အစဉ်မပြတ်ငါတို့ဥစ္စာနှင့်အတူပိုက်ကွက်မည်မဟုတ်ကြောင်းကိုလက်ခံခြင်း.
ပဲလွန်ခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်က, ခွေးရှိနေဆဲ “မွေးစား,” မဟုတ် “ကယ်တင်နိုင်ခဲ့,” တစ်ဦးမှာ ပို. ပင်စိတ်လှုပ်ရှားမှုအအယူအဆကိုတရားစွဲဆို. ကျွန်မရေတွက်နိုင်သည်ထက် ပိုမို. ခွေးပိုင်ရှင်တွေဟာအခုထားသောစာပိုဒ်တိုများနှင့်အတူ၎င်းတို့၏ခွေးကိုမိတ်ဆက်သို့မဟုတ်ဖော်ပြရန်: “သူမသည်ဖြစ်နိုင်စော်ကားမှုအခံရခဲ့သည်။”ကျနော်သူတို့သိဘယ်လိုမေးသောအခါ, သက်သေအထောက်အထားမကြာခဏ circumstantial ဖြစ်ပါသည်, အကောင်းဆုံးမှာ.
အလွဲသုံးစားမှုမှခွေးကိုကယ်တင်လိုစိတ်သင်တဦးတည်းချင်တဲ့မူလတန်းအကြောင်းရင်းတစ်ခုဖြစ်သည်လျှင်သတိထားပါ. လူသားမျိုးနွယ်အပေါ်နဲ့စာနာထုတ်ဖော်ပြောဆိုဖို့နည်းလမ်းတွေအများကြီးရှိပါတယ်, လူသို့မဟုတ်တိရစ္ဆာန်များအတွက်, ဒါပေမဲ့ဒီအထူးသဖြင့်တိရစ္ဆာန်အသင့်အိမ်သို့ဆက်လက်ရွေ့လျား. သင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ရည်ရွယ်ချက်တွေ misread သို့မဟုတ် erroneous ယူဆချက်ကိုဖြစ်စေလျှင်, သင်တို့နှစ်ယောက်နှစ်နောက်ဆက်တွဲနှင့်အတူကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းပါလိမ့်မယ်.
စတီဗင် R ကို. Lindsay, အသုံးချခွေးများအတွက်အပြုအမူနှင့်လေ့ကျင့်ရေးသူ၏ seminal Two-ထဲမှာ volume လက်စွဲစာအုပ်အတွက်, ခွေး၏ဝယ်ယူရရှိမှုတွင်အလွဲသုံးစားမှုနှင့် ပတ်သက်. ဖန်ဆင်းယူဆချက်ကိုစူးစမ်း. လူ့အဆက်အသွယ်များနှင့်အခြားရှောင်ရှားအပြုအမူတွေကိုကြောက်ရွံ့ခြင်းတစ်ခါတစ်ရံတွင်ယခင်နှိပ်စက်ဖို့ခြေရာခံနိုင်ပါတယ်, Lindsay ကအသိအမှတ်ပြု. ဒါပေမယ့်အမိုးအကာလုပ်သားများသူတို့အလားအလာမွေးစားသူများစကားပြောတဲ့အခါရှင်းပြချက်ကိုမှီငြမ်းရန်အမြန်, ဒါကြောင့်စစ်မှန်တဲ့င်ရှိမရှိမသိဘဲ. “ကြမည်မှာသေချာပါသည်, ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအလွဲသုံးမှုဖြစ်ပေါ်ပြီးကြောက်လ၏သိသာအကြောင်းမရှိစေခြင်းငှါ,” Lindsay ကရေးသားခဲ့သည်. “သို့သော်, ဒါဟာဝေးလျော့နည်းမကြာခဏတထိုကဲ့သို့သောအစီရင်ခံစာများ၏ကြိမ်နှုန်းကနေမျှော်လင့်ထားတာထက်ကိုတွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။”
ခွေးကျွန်တော်တို့ကိုပြုပြင်ဖို့မခံနိုင်သည်ကတည်းက, သို့မဟုတ်မိမိတို့၏မိဘများနှင့် ပတ်သက်. တိုင်ကြား, သူတို့ကလူ့ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်မှု၏သားကောင်များင်ယူဆရိုးရှင်းင်, စမကြာခဏကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်နှင့်ကိုက်ညီသောသမိုင်းနဲ့စိတ်ကူးတစ်ခု. သို့သော်မျိုးဗီဇ, inbreeding, နှင့်အမှိုက်သရိုက်များအတွက်အခြေအနေများ, အခြားအချက်များအကြား, စအလွန့်အလွန်ခွေးကိုပုံဖော်နိုင်. ထိုအချိန်ကာလ၏အများစုဟာ, ကျနော်တို့ကယ့်ကယ်ဆယ်ရေးစိတ်ကူးယဉ်ထက်နည်းတဲ့စိတ်ကျေနပ်စရာသက်သေပြစေခြင်းငှါအမှန်တကယ်သိဘယ်တော့မှလိမ့်မယ်. သင်သူမကခွေးပေါက်လေးတစ်ကောင်အဖြစ်မလုံလောက်သောလူမှုရေးကြောင့်သူမလောက်ကြောက်တတ်ခဲ့တဲ့ကြောင်းကိုသိလျှင်သင်အများကြီးအဖြစ်ဒီခွေးကိုချစ်မလား?
ကောင်းမွန်သောမျိုးဆက်များနှင့်အသိစိတ်ကယ်ဆယ်ရေးနှင့်အမိုးအကာအလုပ်သမားများတစ်ဦးခွေးသည်သင်ဆန္ဒရှိရင်သတိထားဖ​​ြစ်လိမ့်မည်, ပင် obnoxiousness ၏ပွိုင့်ရန်. သူတို့ကသင့်ရဲ့အချိန်ဇယားကိုအကြောင်းကိုမေးမြန်းပါလိမ့်မယ်, ခြံထဲမှာ, အကာ, ကလေးတွေ, ခွေးပိုင်ဆိုင်အတွေ့အကြုံနှင့်သင့်. တကယ်တော့, သူတို့မကျင့်လျှင်, သင်တို့ကိုနေရာမှားနေတဲ့ခွေးကိုရှာကြံထားစေခြင်းငှါသည့်သတိပေးလက္ခဏာတစ်ရပ်အဖြစ်ကိုယူ. ထိုသူတို့သည်တ get သို့မဟုတ်ထိုသို့သောလက်တွေ့မကျမျှော်လင့်ချက်များရှိလာတဲ့အခါဒါကြောင့်များစွာသောလူခွေးသန်းပေါင်းများစွာညှဉ်းဆဲဖြစ်ကြောင်းခွေးတွေအကြောင်းကိုနည်းနည်းသိ, သို့ပြန်ရောက်, သို့မဟုတ်တစ်နှစ်စီစွန့်လွှတ်. သူတို့ကိုဖြန့်ဝေသူကိုလူတွေအများကြီးမြင်ကြပြီ, အလွန်အကျွံတစ်ခါတစ်ရံတွင်. အချို့ကိုသင်ခက်ခဲသောမေးခွန်းမမေးပဲသင်တစုံတယောက်ကိုပေးသို့မဟုတ်ရောင်းဖို့စိတ်အားထက်သန်သူတစ်ဦးဦးကနေတစ်ဦးကိုခွေးမလိုချင်ကြဘူး.
ပြဿနာတွေပေါ်လာသည့်အခါလူတွေကခွေးအပြစ်တင်ဖို့လေ့, ဒါပေမဲ့သူတို့နီးပါးအမြဲကျွန်တော်တို့ရဲ့အမှားများမှာ. ကျွန်တော်တစ်ဦးစကားမပြောနိုင်သောရွေးချယ်မှု လုပ်. ဖြစ်စေ (boca Raton မှာကွန်ဒိုတစ်ခုပြာသို့ဆောင်ခဲ့), သို့မဟုတ်ကျမတို့တကယ်ခွေးလေ့ကျင့်ရေးအတွက်အချိန်နှင့်ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးစရာမလိုပါ, သို့မဟုတ်စိတ်ကူးယဉ်၌ခိုလှုံရာကိုယူ. လောက်နီးပါး, သင်ချစ်ရန်တစ်ခုခုလိုအပ်သို့မဟုတ်လိုသောကြောင့်သင်ကခွေးကိုရဖို့င်, ကိုချစ်ရန်သို့မဟုတ်အခြားအရာ, သို့မဟုတ်သင်သွားကြောင်းဖြစ်ကြောင်းကိုသင်ကိုချစ်သောသူအမှုအရာကိုအစားထိုးချင်ပါတယ်ကြောင့်. အဲဒီအကြောင်းမှားသို့မဟုတ်နှောင့်အယှက်အဘယ်အရာမျှမရှိင်, ဒါပေမယ့်တစ်ဦးခွေးကိုဇွတ်အတင်းကြောင့်ဖိနှိပ်သို့မဟုတ်ငြင်းပယ်ရန်မန်ဆောင်မှုမ, “ငါကလေးတွေတစ်ဦးကိုခွေးရတယ်” သို့မဟုတ် “ကိုယ့်ကြောင့်ကွာ burglars စောင့်ရှောက်ခဲ့တယ်။”
ထိုအချစ်စေခြင်းငှါအလိုဆန္ဒအခြားဝိသေသလက္ခဏာများထားတာတွေကမ? သင်လူနာ Are? သင်ဆူညံသံအဘို့အမြင့်မားသောသည်းခံစိတ်ရှိသည် Do, ဖရိုဖရဲ, နှင့်အုတ်အုတ်ကျက်ကျက်? သင်ဆုသည်စင်ကြယ် rugs နှင့်ပရိဘောဂလုပ်ပါ? သို့မဟုတ်နင်္ဂနွေနေ့နှောင်းပိုင်းမှာအိပ်ပျော်လျက်နေကြသည်? အလွယ်တကူအမျက်ဒေါသ Do? ခွေးရယူခြင်းကြီးတစ်ခုဖြစ်ပါသည်, စျေးကြီး, နှစ်ပေါင်းဘို့သင့်ကိုအကျိုးသက်ရောက်သောအသက်-ပြောင်းလဲဆုံးဖြတ်ချက်.
* ခွေးများသည်လူ့မဟုတ်, သတိရ. သူတို့ကလူ့စကားများသို့မဟုတ်အသုံးအနှုန်းများအတွက်မစဉ်းစားကြဘူး.
သူတို့ဟာပုံပြင်များမပြောပြနိုင်, သည့်အဖြစ်အပျက်အတိုင်းလိုက်နာ, ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ကိုဖတ် (သူတို့သည်ငါတို့စိတ်ခံစားပြုပါပေမယ့်). သူတို့ဟာမဟုတ် “အမွေးကလေးများ,” သို့မဟုတ်ကလေးများမှာအားလုံး. ငါတို့သည်သေမင်းသူတို့ကိုချစ်စေခြင်းငှါ, ဒါပေမယ့်သူတို့ကျွန်တော်တို့ကိုတွေလိုပဲဆိုလိုတာမဟုတ်ပါဘူး. တကယ်တော့, သူတို့ကျွန်တော်တို့ကိုမကြိုက်ဘူးလို့ဖြစ်တယ်အများဆုံးခွေးပိုင်ရှင်တွေသူတို့ကိုမချစ်. သူတို့အ dogness ငြင်းပယ်နှစ်ခုစလုံးမျိုးစိတ်တစ်ခု disservice ဖြစ်ပါသည်. သူတို့တိရစ္ဆာန်များဖြစ်ကြောင်းမေ့လျော့, တစ်ဦးချင်းစီကတခြားအဘို့နှင့်စားစရာဘို့ထူးခြားသောမွေးရာပါအလိုဆန္ဒများကြောင့်အဓိကအားဖြင့်မောင်းနှင်တဲ့, လိင်, အာရုံစူးစိုက်မှု, သူတို့ရဲ့သဘောသဘာဝ၏အဖြစ်မှန်ပြောင်းလဲပစ်ရန်ဖြစ်ပါသည်, ထိုသူတို့ကိုကိုအန္တရာယ်ဖြစ်စေရန်.
* ခွေးများကုသမဟုတ်, ဖြစ်စေ.
ခွေးနှင့်သင်၏ဆက်ဆံရေးကိုဖွယ်ရှိသင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်မိသားစုသမိုင်းကြောင်းနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအတိတ်ကြောင့်ထိခိုက်ခြင်းနှင့်ပုံဖော်ကြလိမ့်မည်, ဒါပေမယ့်အဟောင်းစိတ်ဒဏ်ရာအနာကိုပျောက်စေခြင်းသို့မဟုတ်ပျက်ပြယ်အလောင်းအစားဖြည့်ဖို့ခွေးတစ်ကောင်ရဲ့စွမ်းရည်ကိုကန့်သတ်သည်. လူတွေဟာသူတို့ရဲ့ခွေး၎င်းတို့၏စိတ်တွင်းအကြံအစည်နားလည်သောအမှန်အကန်ဆိုသည်ကားနဲ့သူတို့ရဲ့အနက်ရှိုင်းဆုံးလျှို့ဝှက်ချက်များကိုသိရကြလိမ့်မည်, သို့သော်တိရစ္ဆာန်ပေါ်မှာသင့်ရဲ့စိတ်ခံစားမှုဝန်စည်စလယ်စုပြုံမ. သင်ပြဿနာများနှင့်အတူအကူအညီလိုလျှင်, အဓိကသို့မဟုတ်အသေးအဖွဲ, နားလည်ပါတယ်. သင့်ရဲ့ခွေးကိုသင့်ခင်ပွန်းသို့မဟုတ်ဇနီးသည်ထက်သင်ပိုကောင်းနာ​​းလည်တယ်ဆိုရင်, ခွေးဟာအရိုးပေး, ထို့နောက်မင်္ဂလာဆောင်သည်တိုင်ပင်ကြည့်ရှုသွား, ဒါမှမဟုတ်အလွန်အနည်းဆုံးသင့်အိမ်ထောင်ဖက်နှင့်အတူအချို့သောဆွေးနွေးမှုများရှိသည်. သင်ပျော်ရွှင်စေရန်သင့်ခွေးကိုမေးပါသို့မဟုတ်သင့်စိတ်ကျရောဂါကုသမထားပါနဲ့. သင့်ရဲ့ခွေးကိုရဲ့အကြံအစည်ဖြစ်နိုင်သင်သည်သင်၏တင်းပါးကိုပယ်ရသူ့ကိုအစာကျွေးသွားသည့်အခါအပေါ်အဓိကထား.
* ခွေးများသည် ပို. ပို. sagacious သောနတ်နှင့် prescient စိတ်ဝိညာဉ်အဖြစ်ရှုမြင်လျက်ရှိသည်.
ခွဲတမ်းသီအိုရီကမဝယ်ဘူး. ခွေးနှင့်သင်၏ဆက်ဆံရေးကိုလွယ်, ပိုကောင်း, ခွေးရိုးရှင်းကြောင့်. သူတို့ကစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းကိုချစ်, လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်များနှင့်ကြည်လင်ပြတ်သားမှုကိုပေး, ခေါင်းဆောင်မှု, စိတ်ဝင်စားဖွယ်အနံ့, အခြားခွေးတွေ, နှင့်, ဟုတ်ပါတယ်, အစားအသောက်နှင့်ပေးသူကိုလူတွေ. ခွဲတမ်းသီအိုရီ၏အုတ်မြစ်တစ်ခုမှာ: သင့်ရဲ့ခွေးကိုသင်နှင့် ပတ်သက်. အရူးဖြစ်ပါသည်, ဒါပေမဲ့သူလည်းတစ်ဦး Hamburg ကိုင်ပြီးအခြားအလုနီးပါးမည်သူမဆိုချစ်ရန်သင်ယူနိုင်.
* ခွေးနှင့်အတူနေထိုင်နေမှငါ့ချဉ်းကပ်မှု၏တစ်ဦးကကျောက်ခဲအိပ်ယာအယူအဆကျွန်တော်တို့လက်တွေ့ကျဖို့လိုအပ်လို့ပါပဲ, ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်, ဖန်တီးမှု, လူမျိုးအပေါ်ပိုခက်ပေမယ့်ခွေးအပေါ်ပိုမိုလွယ်ကူ.
သည်းခံခြင်း၏စည်းကမ်းချက်များ၌ကိုယ်ကိုအများကြီးမျှော်လင့်ထား, ဆုံးဖြတ်ချက်, နှင့်ကိုက်ညီမှု. သင်ကဲ့သို့, ခွေးဝတ်စုံကိုနောက်သို့လိုက်ပါမည်ဟု. ၏စည်းကမ်းချက်များ၌မထင်မစမ်းကြည့်ပါ “ကောင်းသော” နှင့် “ဆိုးသော” ခွေး. ဤသတ္တဝါများအားလျှောက်ထားကြဘူးကြောင်းလူ့အယူအဆတွေရှိပါတယ်. ရှိပါတယ်, အစားအ, မကျင့်သောလောကဓာတ်ကိုအသက်ရှင်ဖို့ဘယ်လိုနားလည်သောခွေးနှင့်ခွေး. တခါတရံ, ခွေးသည်မူလကပင်အကြမ်းမဖက်များမှာ, မျိုးရိုးဗီဇများပျက်စီး, သို့မဟုတ်ပြုပြင် ကျော်လွန်. ညှဉ်းဆဲ. ဝမ်းသာစရာ, သူတို့ရှားပါးသောင်.